October 20, 2020 Xuseen 2
Madaxweynayaashii hore ee Soomaaliya Cali Mahdi Maxamed, Sheekh Shariif Sheekh Axmed iyo Xasan Sheekh Maxamuud ayaa faragelin ku sameeyey khilaafka dhanka saami qaybsiga ah ee u dhexeeya beelaha Xawaadle iyo Abgaal oo ku muransan maamulka Hirshabeelle.
Saddexda madaxweyne ayaa la sheegayaa inay doonayaan inay faragelin ku sameeyaan khilaafka u dhexeeya beelaha Xawaadle iyo Abgaal ee salka ku haya dhismaha barlamaanka 2aad ee Hirshabeelle iyo kursiga madaxweynaha maamulkaasi.
Beesha Abgaal ayaa rumaysan in madaxweynuhu yahay tartan furan halka beesha Xawaadle ay isku rabto in keligeed ay u tartanto, waxaana la sheegay inay sidoo kale xiisaddaan qayb ka tahay dowladda federalka ah oo madaxweynaha la rabta Cali Guud-laawe Madaxweynayaashii hore waxaa la xaqiijiyey inay kulamo xasaasi ah iyo wadahadal taleefan la yeesheen waxgaradka labada beelood si ay ugu qanciyaan in laga heshiiyo awood qaybsiga maamulka Hirshabeelle.
“Madaxweyne Xasan Sheekh iyo Madaxweyne Cali Mahdi, waxay isla garteen in la badbaadiyo HirShabeelle oo si dhab ah loo galo tabashooyinka taagan waxaana arrintaas ka qeyb qaadan doono Imaamka iyo Ugaas-ka Abgaal,” ayuu yiri mid kamid ah odayaasha dhaqanka.
Arrintaan ayaa ku soo beegmaysa xilli uu khilaaf ba’ani ka dhexeeyo labada beelood isla markaana siyaasiyiinta beelaha ee Hirshabeelle ay aad ugu kala fogaadeen dhismaha barlamaanka iyo doorashada madaxtinimada maamulkaasi.
BIL SADDEX MEEL AY JOOGTABA WAA RAFANAYDAA! Weli laysma gaarin
Soomaaliya khilaaf baa ragaadiyay.
Laba walaalo ah hadii la yiraahdo wadanka xukuma kuma heshiin karaan.